Zaza Phototherapy Incubators Factory, Suppliers | China Zaza Phototherapy Incubators Manufacturers
Home » Products » Medical Fitaovana » Perinatal Care » Zaza Phototherapy Incubators
Toy ny zaza iray incubator ambony dia tsy tsotra sy ny fifandraisana ny incubator phototherapy vondrona. Ny fitaovana fampidirana mahatonga ny zaza vao teraka amin'ny hyperbilirubinemia afaka mandray manodidina manga-ray phototherapy ao anatin'ny iray mety dia voaaro sy azo itokisana tontolo iainana. Tsipiriany rehetra anisan'izany ny elanelana eo phototherapy vondrona sy ny manam-paharetana, nanazava mafy sy ny sisa sy ny vokatra avy maharitra fikarohana sy ny traikefa henjana ho an'ny zaza vao teraka manam-paharetana raha mbola atao fatratra fanatanterahana ny andraikitry ny fiarovana ny zaza amin'ny fikarakarana tsara indrindra azo atao.
Ny zaza phototherapy incubator 8502D mitandrina ny neonate marary ao miovaova tontolo iainana sy manome fitsaboana tsara indrindra jaundice. Ny famolavolana ny phototherapy incubator mamela ny marefo marary izay mila fikarakarana aina ny tsara indrindra sy ny mpikarakara ny tarika izay mampiasa mora foana sy sariaka mifototra amin'ny andian-dahatsoratra incubator ny zaza.
Ny 8502S no fomba fototra iray amin'ireo andian-dahatsoratra 8502 amin'ny asa ny zaza sy ny phototherapy incubator fitsaboana ho an'ny marary amin'ny jaundice neonate. Ankoatra izany, ny vondrona dia afaka mampiseho ny marina masontsivana, rivotra mari-pana, hoditra mari-pana sy ny maro fanairana amin'ny ambaratonga telo.